Sandesh Prawahख्यमन्त्री शाक्यले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्लिन त? यस्तो छ अंग गणित। - Sandesh Prawah
ख्यमन्त्री शाक्यले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्लिन त? यस्तो छ अंग गणित।
आईतवार २४ आश्विन, २०७८
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज संसदबाट विश्वासको मत लिने भएकी छन् । गत भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त शाक्यले नेकपा एमाले विभाजनका कारण अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिने भएकी हुन् । मुख्यमन्त्री शाक्यका तर्फबाट विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाक्यका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार माधव अर्यालले विश्वास मत सम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्का मार्फत दर्ता गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाक्यको विश्वासको मत लिने सम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरु तटस्थ बस्ने भएका छन् । साना दलहरु तटस्थ बस्दा मुख्यमन्त्री शाक्यलाई थप ८ मत कम हुन्छ । रातोपाटी बाट